Maamulka Qaatumo State & Dhaqanka Beesha Dhulbahante oo soo wada gudbiyey Xubnaha Beeshooda iyo Faroole oo isna xubno kale soo wada – idalenews.com
Maamulka Qaatumo State & Dhaqanka Beesha Dhulbahante oo soo wada gudbiyey Xubnaha Beeshooda iyo Faroole oo isna xubno kale soo wada
Salaadiinta Beesha degta Sool, Sanaag iyo Ceyn ayaa durbaba gudbiyey 8dii xildhibaan ay beeshu laheyd, taasoo khilaafsan heshiiskii ay gaareen qaar ka mid ah saxiixayaasha oo maalin ka hor shir uu ugu soo dhamaadey magaalada Nairobi. Shirkaas ayaa 3 ka mid ah xildhibaadaasi la siiyey Madaxweynaha Maamulka Puntland halka dhanka siyaasiyiinta & Odey dhaqameedyada beeshaasi iyo maamulkooda Qaatumo State ay ka hor yimaadeen arrintaas.
Odey-dhaqameeyada ka yimid goboladaas la baxay Qaatumo State ayaa sheegay in iyagu yihiin kuwa xaq u leh sida ku cad heshiiskii Garowe 1 & 2 ee siinaayey odey-dhaqameedka awoodda soo xulista barlamaanka, isla markaasina aysan ogolaan doonin in maamulka Puntland ama saxiixe gaar ah soo faragaliyo liiska xubnaha beesha.
Xubnaha Odey-dhaqameedka Qaatuma State ay gudbiyeen maanta ayaa gabi ahaantoodba ah wajiyo cusub, taasoo ay kaga duwan yihiin beelaha kale ee Somalida oo intooda badan dib u soo magacaabey xildhibaanadii hore.
Liiska xubnaha Cusub ee Beesha Dhulbahante magacyadooda helney waxaa ka mid ah:
1. Dr. Ali Khalif Galleyr
2. Cabdiwaaxid Shariif Maxamed
3. Siyaad Maxamuud Shire
4. Xaaji Cabdi yare Maxamed
5. Cabdikariim Xasan Jaamac
6. Yuusuf Axmed Nuur
7 iyo 8: Waa Labo Dumar ah oo aan magacyadooda weli aan la shaacin.
Liiska xubnahaan beesha Dhulbahante oo aan la garaneyn sida uu Madaxweyne faroole u aqbali karo maadaama uusan isaga soo xulin lagana talo-gelin ayaa haddii sidooda loo qaato u muuqda xubno ku cusub barlamaanka Somalia iyo in beeshaasi fursad siisey siyaasiyiinta cusub ee beesha uga mid noqon doona siyaasada Somalia. Taasna waxay tusaale iyo ku dayasho u tahay beelaha kale ee aan wax bedel siyaasadeed looga baran 20kii sano ee la soo dhaafey, isla markaasna niyad jibiyey beelahooda iyo Qaranka Soomaaliyeed intaba.
Madaxii BBC Somali Service, Yuusuf Garaad, oo shaqadii ka tagey lana filaayo inuu ka mid noqdo Musharaxiinta Madaxweynaha